National Power News:: चिन्ता, तनाव र उदासी हो ठूलो रोग, यसरी हटाउन सकिन्छ National Power News:: चिन्ता, तनाव र उदासी हो ठूलो रोग, यसरी हटाउन सकिन्छ
चिन्ता, तनाव र उदासी हो ठूलो रोग, यसरी हटाउन सकिन्छ
Tuesday, July 3, 2018 National Power
हरेक समस्याको लागि अरुलाई दोष दिनभन्दा पहिले अन्र्तमनको ऐनामा आफूलाई हेरेर आफ्नो कमजोरीहरु पत्ता लगाउने कोसिस गर्नु पर्छ । यदि हामीले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सिक्यौं भने मात्रै आफूभित्र परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्छौं । आजकाल सामान्य बोलचालीमा पनि धेरै मानिसहरुको मुखबाट ‘टेन्सन’, ‘स्ट्रेस’ र ‘डिप्रेसन’ जस्ता नकरात्मक शब्द बारम्बार सुनिन्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ हाम्रो जिन्दगीमा साँच्चै यति धेरै तनाव छ त ? साँच्चै नै यस्ता कुनै समस्या छन् भने पनि के यसबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन ?
हामीले आफ्नो डिक्सनेरीबाट ‘स्ट्रेस’ शब्दलाई सँधैको लागि बाहिर निकाल्न पर्छ किनभने आजकाल आफूभन्दा ठूलाको कुरा सुनेर घरमा साना बच्चाहरु पनि ‘म धेरै तनावमा छु’ भन्न थालेका छन् । बिनाकारण यस्ता नकरात्मक कुराहरु बारम्बार दोहोर्याउने हो भने यसले अन्तिममा तनाव निम्त्याउन सक्छ । पूर्विय सँस्कृतिमा मन्त्रको शक्तिलाई धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । मन्त्र सकरात्मक उर्जाले भरिपूर्ण हुन्छ । यसलाई बारम्बार उच्चारण गरेमा सुन्ने मानिसहरुले पनि राम्रो महसुस गर्छन् । बारम्बार मन्त्र उच्चारण गर्नाले मानिसहरुको मनोबल बढ्छ । जसरी मन्त्रले हाम्रो जीवनमा राम्रो असर गर्छ त्यसरी नै तनाव र डिप्रेसनजस्ता नकरात्मक शब्द पनि बारम्बार दोहोर्याएमा पुरै वातावरणमा नकरात्मक उर्जा सञ्चार हुन्छ ।
हामी किन क्रोधित हुन्छौं रु हामी सबैले जीवनमा कुनै न कुनै यस्तो परिस्थितीको सामना गरेको हुन्छौं जतिखेर इच्छाहरु धेरै हुन्छन् तर केहि पनि पुरा हुँदैन । अर्को स्थिती यस्तो पनि हुन्छ जब हाम्रो अगाडि नचाहेको स्थिती र नचाहेको मानिसहरु आउँछन् हामीलाई त्यत्तिकै रिस उठ्छ । एकपटक अरु कुराहरु बिर्सेर आफ्नो बच्चाको बारेमा सोच्नुहोस् । के उनीहरुले तपाईको हरेक कुरा मान्छन् रु मान्दैनन भने सोच्नुहोस्, जब हाम्रो बच्चाहरु त हामीले चाहे अनुसार चल्दैनन् भने अरु नातेदार, साथी वा सहकर्मीसँग किन यस्तो आशा गर्ने ?
अलगअलग परिवारबाट आउने मानिसहरुको संस्कार र विचारमा कुनै समानता हुँदैन । यसै फरकको कारणले पनि अरुसँग तालमेल मिलाउन धेरै मुस्किल हुन्छ । व्यक्तिको राम्रो वा नराम्रो संस्कारले उनीहरुको हरेक निर्णयमा प्रभावित बनाउँछ । परिवारमा पतिपत्नी बीचमा पनि यसै कारणले वैचारिक मतभेद हुन सक्छ । यसै कारणले अफिसमा सँगै काम गर्ने मानिसहरु बीच आपसी तालमेल हुँदैन । सबैको स्वभाव एकजस्तो हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदैससाना कुराको लागि आपसमा विवाद बढाएर आफ्नो महत्वपूर्ण समय, उर्जा र मनको शान्ती किन नष्ट गर्ने ?
आजकाल धेरै मानिस आफै परिवर्तन हुनको सट्टा अरुको व्यवहारलाई नियत्रण गर्ने कोसिस गर्छन् । यसले उक्त व्यक्तिमा कुनै बदलाव आउँदैन तर नियन्त्रण गर्न खोज्ने मानिसको मन भने तनावग्रस्त हुन्छ र विस्तारै डिप्रेशनको शिकार हुन सक्छन् । यस्ता मानिसहरुलाई अरुको बारेमा रातदिन सोचेर आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई कति धेरै नोक्सान गरिरहेका छु भन्ने अलिकति पनि हेक्का हुँदैन ।
घर, कार्यालय जहाँ भए पनि यदि कसैले नराम्रो व्यवहार गरेर तपाईको मनोबल तोड्ने कोसिस गर्छ र भने उ सँग बहस गरेर आफ्नो उर्जा नष्ट नगर्नुहोस् । उनीहरुसँग विवाद गर्दा उनीहरुको जस्तो नकरात्मकता तपाईमा पनि देखिन्छ । याद गर्नुभएको छ, जब कहिलेकाँहि रिसको झोँकमा कसैलाई गाली गर्नुहुन्छ तर, पनि यसले उसलाई केहि पनि छुँदैन । हामी कसैलाई एक मिनेट गाली गर्छौं तर, यसले उल्टै दिनभर हाम्रो मन अशान्त हुन्छ र किन यस्तो भइरहेको छ भनेर हामी सोच्न सक्दैनौं ।
हामी सबै एकअर्कासँग राम्रो वा नराम्रो व्यवहारको माध्यमले जोडिएका हुन्छौं । यदि तपाई दिनभर खुसी रहन चाहनुहुन्छ भने अरुलाई सम्मान र प्रेम गर्नुहोस् । हामीलाई खुसी पाउन अरु केहि गर्ने जरुरी नै पर्दैन, राम्रो काम नै हाम्रो खुसीको आधार हो । यदि तपाईले आफ्नो अन्तर्मनलाई राम्रोसँग चिहाउनुभयो भने तनाव मनको भित्र नै रहेको पाउनुहुन्छ ।
यदि तपाई वास्तवमा आफ्नो वरिपरिका मानिसहरुको राम्रो चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मनको प्रतिक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ । अरुको कुनै पनि व्यवहारमा तपाईको प्रतिक्रिया गलत हुन हुँदैन । सन्तुलित व्यवहारले वरिपरिका तनावमा बाँचिरहेका मानिसहरुलाई पनि खुसी हुने कला सिकाउनु नै सुखमय जीवनको आधार हो । यो पारिवारिक मात्रै हैन व्यावसायीक सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ । माहौललाई सकरात्मक बनाउन सबैले नीजि स्तरमा प्रयास गर्नुपर्छ ।
सहि रुपमा मनमा परिवर्तन ल्याउन कम्तिमा पनि पन्ध्र बीस दिनसम्म योजनाबद्ध ढंगले अभ्यास गर्नु जरुरी पर्छ । एक डायरीमा आफूलाई आवश्यक कार्य र सन्तुलित व्यवहारको एक चेकलिस्ट बनाउनुहोस् र राती सुत्न अगाडि त्यसै चेकलिस्टको माध्यमले आफ्नो हरेक राम्रो नराम्रो व्यवहारलाई इमान्दारीपूर्वक मुल्याङ्कन गर्नुहोस् ।
साथै हरेक दिन बिहान र राती सुत्नभन्दा पहिले ‘म एक स्वस्थ र प्रसन्न व्यक्ति हुँ’ ‘मेरो शरीरको प्रत्येक कोष सकरात्मक उर्जाले भरिएको छ’ जस्ता वाक्य मन्त्रको रुपमा मनमनै दोहोर्याउनुहोस । यस अभ्यासले तपाईको मनमा नयाँ उत्साहको सञ्चार हुन्छ र मु्स्किल हालतमा पनि सँधै खुसी रहन सक्नुहुन्छ ।